कवयित्री अनिता लामाले कवितामार्फत नारी सशक्तीकरणको वकालत गरेकी छन्। धुम्बाराहीस्थित महिला सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालक समिति र महिला सामुदायिक केन्द्रले आयोजना गरेको एकल कविता वाचनमा उनले नारी आवाज बुलन्द गरेकी हुन्।
अनिताले ‘सलाम आदरणीय आमाबुवा’ कवितामार्फत वाचन सुरु गरिन्। त्यसपछि ‘नागरिकता’ र ‘रगत’ शीर्षक कवितामा नारी शक्तिको प्रशंसा गर्दै राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक विभेदप्रति व्यंग्य कसिन्। नारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक र भोग्य वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्ने परम्परागत पुरुष मनोविज्ञानकै कारण समस्या पैदा भएको आशय उनका कविताको थियो।
‘६ बराबर ६’ कवितामा उनले ६ दिदीबहिनीलाई प्रतीकात्मक रूपमा उभ्याउँदै नारी शक्तिको बखान गरिन्। ‘स्वस्थानी सांगे’, ‘भिडियो कल’ र ‘ह्यारी, आस्याङ र साहिबा’मा वैदेशिक रोजगारको दर्दनाक कथा भनिन्। काठको बाकसमा लोग्नेको लास आउ“दा स्वस्थानी सांगेमा मग्न युवतीको मनोदशा कस्तो हुन्छ होला ? आफन्तजन र घरको खुसीका लागि भिडियो कलमा विदेशका अग्ला भवन र चिल्ला सडक देखाउने युवाको मनचाहिँ आफैंमा कसरी भतभती पोलिरहेको होला ?
कविता सुन्दै गर्दा दर्शक श्रोता उत्तिकै गम्भीर बने। उनले ‘विद्यार्थी’, ‘त्यो दिन’, ‘मेरो देश मेरो सर्वस्व’लगायत डेढ दर्जन कविता सुनाइन्। वाचनमा कवि फूलमान वलले पनि सघाए।
वाचित कवितामाथि टिप्पणी गर्दै समालोचक तथा कवि सुरेश हाचेकालीले अनिताका लेखनमा माक्र्सवादी सौन्दर्यचेत, राष्ट्रिय एकता र महिला उन्मुक्तिको स्वर पाएको दाबी गरे। पछिल्लो समय विभिन्न समुदायबाट नेपाली साहित्यमा भित्रिएको मौलिक विम्ब, प्रतीक र मिथकहरूले भिन्नै स्वाद दिलाएको दाबी गर्दै हाचेकालीले अनिताका केही कवितामा तामाङ समुदायको सांस्कृतिक स्वाद भेटिने बताए।
राष्ट्रिय नाचघरका महानिर्देशक राजेश थापा, पूर्वसभासद् मीरा ध्वोँजू, शिवकुमारी खनाल लगायतले अनिताका कवितामा समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना सशक्त रूपमा पाइने बताए। कविता वाचनअघि सरिता, सविता र संगीता लामाले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। ‘अनुराग’, ‘अर्पण’ र ‘आतुङ’ कविताकृति सार्वजनिक गरिसकेकी अनिताले केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय नाचघरमा पहिलो एकल कविता वाचन गरेकी थिइन्।